﻿4Recruitment Deal Breakers- From an HR Expert’s Point of View ﻿
“ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အခြားသော candidate များကိုပိုပြီးဦးစားပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။” ဆိုတာမျိုးဟာ သင့်ရဲ့ အလုပ်လျှောက်ထားခြင်းကို ငြင်းပယ်မှုပြုလုပ်လိုက်ကြောင်း အကြောင်းကြားလာသည့် စာများတွင် တွေ့မြင်ရလေ့ရှိတဲ့ စာသားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် . . . ဒါကဘာကိုတစ်ကယ်ဆိုလိုချင်တာလဲ? ဒီ e-mail ကို အလုပ်လျှောက်လွှာတင်သူများထံသို့မပို့မှီ နောက်ကွယ်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့သေးပါသလဲ?
HR လောကတွင် ပဲ့ကိုင်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျင်လည်ခဲ့ဖူးသော နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံရှိ HR သုသေသနပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Bunmi Oluwoye ကတော့ အလုပ်လျှောက်ထားသူဟာ အင်တာဗျူးဖြေဆိုရာတွင် မိမိကိုယ်ကို ကောင်းမွန်စွာဖြေဆိုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ထင်ထားခဲ့ပေမယ့်လည်း Rejection Letter ကို ရရှိလာရတဲ့ အကြောင်းအရင်းများကို အောက်ပါအတိုင်းဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါတယ် -
၁။ သင်လျှောက်ထားလိုက်တဲ့အလုပ်ဟာ သင်နဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိသောကြောင့်
အလုပ်ခေါ်ယူခန့်အပ်ဖို့အတွက် စဉ်းစားရာတွင် လုပ်ရမည့်အလုပ်နှင့် အလုပ်လျှောက်ထားသူ၏ အရည်အချင်းများဟာ ကိုက်ညီမှုရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အင်တာဗျူးအဆင့်ကို ကောင်းမွန်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သင်ထင်နေခဲ့ရင်တောင်မှ လုပ်ငန်းရှင်ဘက်က သင်ဟာ ထမ်းဆောင်ရမယ့်တာဝန်များနဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိသူတစ်ဦးလို့ယူဆသွားပါက သင့်ထံသို့ Rejection Letter တစ်စောင်ရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်ရဲ့အရည်အချင်းတွေ၊ ကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့လည်း သက်ဆိုင်မှုရှိမနေပါဘူး။ ဥပမာ - သင့်အနေနဲ့ စာရွက်စာတမ်းများပေါ်မှာတော့ ကိုက်ညီတဲ့အရည်အချင်းရှိနေသော်လည်း သင့်ရဲ့အမူအကျင့်များဟာ လက်ရှိသင်အလုပ်လျှောက်ထားတဲ့ Organization ရဲ့ culture နဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိခဲ့ပါကလည်း ငြင်းဆိုခြင်းခံရနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒီအချက်တွေကို အလုပ်အင်တာဗျူးပြုလုပ်စဉ် သင်ဖြေကြားခဲ့တဲ့ အဖြေများအပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး အလုပ်ရှင်များဖက်မှ သင့်ရဲ့ စိတ်နေသဘောသဘာဝကို ကောင်းစွာခန့်မှန်းနိုင်မှာဖြစ်သလို၊ သင်ဘာကိုလိုချင်လဲ၊ သင်ဘယ်လောက်ကြာကြာ ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ဆက်လက်ရှိနေမှာလည်း၊ ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ပါက သင့်အတွက်ရော စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိနိုင်မလား အစရှိတာတွေကိုလည်း အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် Rejection Letter တစ်စောင်ကိုရရှိခဲ့ပါက သင်ဟာ သူတို့နဲ့ အခြေခံစိတ်သဘောထားအရ ကိုက်ညီမှုမရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်လို့ပါပဲ။
၂။ သင့်ရဲ့ CV ဟာ လျှောက်ထားလိုတဲ့ အလုပ်ရာထူးအတွက် သီးသန့်ပြင်ဆင်ထားတာမဟုတ်ခြင်း
လစ်လပ်နေတဲ့ရာထူးတစ်ခုအတွက် ကုမ္ပဏီဖက်မှလိုအပ်နေတဲ့အရာများကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက သင့်ဖက်က အလွန်ကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုများစွာကို ချရေးထားရင်တောင်မှ ထိရောက်မှုရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အင်တာဗျူးသူမှ သင့်ဖက်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလာတဲ့ ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများကို (ထိုအရာများက တစ်မူထူးခြားကောင်းမွန်ပြီး အထင်ကြီးစရာကောင်းနေတဲ့အတွက်) စိတ်ဝင်တစားနားထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်မှ ဒီကျွမ်းကျင်မှုများနဲ့ အတွေ့အကြုံများဟာ ကုမ္ပဏီရဲ့လိုအပ်ချက်များကို မည်သို့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သလဲဆိုတာကို သူတို့မြင်လာအောင် ပြသနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါက ရလာဒ်အနေနဲ့ Rejection Letter တစ်စောင်ကိုသာ သင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်လျှောက်ထားလိုတဲ့ အလုပ်နေရာနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ “သက်ဆိုင်ရာ” ကျွမ်းကျင်မှုများကို ပြန်လည်စီစစ်ဖော်ပြပြီး သူတို့ (အလုပ်ရှင်) အတွက်ကိုလည်း သင့်ဖက်က ထိုအတိုင်းပြုလုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိနေကြောင်း ရှင်းလင်းစွာပြောကြားနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင် ကောင်းမွန်ထိရောက်စွာပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ဟာ အရေးပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ အနာဂါတ်အတွက် သင့်ထံတွင် အစီအစဉ်များရှိမနေခြင်း
ရည်းစားထားဖို့ စဉ်းစားရာတွင် တစ်ဦးမှ နောက်တစ်ဦးသို့ ခဏခဏပြောင်းချစ်တတ်သူမျိုးကို မိမိဘက်က လက်ခံရန်တွန့်ဆုတ်နေတတ်သလိုပါပဲ . . . လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့လည်း အလုပ်တစ်ခုမှတစ်ခု မကြာခဏပြောင်းတတ်တဲ့ “Job hopper” မျိုးကို အလိုရှိကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အချို့သော အလုပ်ရှာဖွေနေသူများဟာ သူတို့ရဲ့ career ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို သေချာစွာသတ်မှတ်ထားခြင်း/ သိရှိကြခြင်း မရှိကြသေးတဲ့အတွက် အင်တာဗျူးပြုလုပ်စဉ်နှင့် သူတို့ရဲ့ CV ပေါ်တွင် မကြာမကြာဆိုသလို ဒီအချက်ကို သိသာစွာတွေ့မြင်နေရလေ့ရှိတတ်ပါတယ်။ အချို့သော Recruiter များဟာ ထိုကဲ့သို့သောသူများကို စောလျှင်စွာရိပ်မိတတ်ကြပြီး ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့်လူစာရင်းမှ ပယ်ထုတ်လိုက်တတ်ပါတယ်။
၄။ တစ်ဖက်သားမှ မိမိအပေါ် အထင်အမြင်ကောင်းမွန်လာစေရန် မကြိုးစားခြင်း
အင်တာဗျူးဖြေဆိုရန်သွားသည့်အခါတွင် တစ်ချိန်တည်းမှာ အလုပ်ရှင်/ အင်တာဗျူးသူမှ သင့်အပေါ်ကောင်းမွန်တဲ့ impression ကိုရရှိစေရန်အတွက် ကောင်းစွာပြင်ဆင်သွားသင့်ပါတယ်။ အလုပ်ရှင်များဟာ သင့်ကိုအလုပ်ခန့်အပ်မှာဖြစ်ပြီး သင်တင်ထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကို အလုပ်ခန့်အပ်မှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ CV မှာ အရည်အချင်းတွေ ကျွမ်းကျင်မှုတွေများစွာကို ရေးသားဖော်ပြထားခဲ့ရင်တောင်မှ သင်ဟာ အလုပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုရှိပြီး၊ ကောင်းမွန်စွာတုန့်ပြန်နိုင်တဲ့ team player တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကို အင်တာဗျူးဖြေဆိုစဉ်တွင်သာ ပြသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကောင်းမွန်တဲ့ CV Form တစ်ခုဟာ သင့်ကိုအင်တာဗျူးအခန်းထဲသို့ရောက်အောင် ကူညီနိုင်မှာဖြစ်သော်လည်း အခြားသော soft-skill များဖြစ်ကြတဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိခြင်း၊ စကားပြောကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် presentation skill များဟာ အင်တာဗျူးဖြေဆိုပြီးနောက် မိမိတို့ရဲ့ အလုပ်ရှင် - ဝန်ထမ်းဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုခိုင်မာလာစေမယ့်အရာများဖြစ်ကြောင်း သတိပြုကြဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။